खा'ली भयो काठमाडौ, एकै दिन ५ लाखले उप'त्यका छोडे -
Homeसमाचारखा’ली भयो काठमाडौ, एकै दिन ५ लाखले उप’त्यका छोडे
April 28, 2021 admin समाचार 429
दशैं तिहा’रमा जस्तै काठमाडौ उपत्यका खाली भएको छ । कोरोनाकको महामारी दोस्रो लहर सुरु भएसंगै उपत्य’कामा निषेधाज्ञाको निर्णय भएसंगै काठमाडौ छो’ड्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले घर फर्कन चाहनेहरुका लागि दुई दिनको समय दिएको थियो । यकिन त’थ्याङ्क कतै अद्यावधिक नगरिए पनि यात्रु चाप हेर्दा झन्डै पाँच लाखले एकै दिन उपत्यका छा’डेको अनुमान छ ।
कोरोना महा’मारीको महामारी भयावह रूपमा फैलिएको भन्दै त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्र’णका लागि बिहीबारदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो । गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्क मङ्गलबार बिहानैदेखि घर फर्कि’नेहरूले खचाखच भरिएको थियो । यातायात व्यवसा’यी मिन पनेरुले बसपार्कबाट छुटेका प्रायः सबै सवारी साधन यात्रुले भरि’भराउ भएको जानकारी दिए ।
देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यका भित्रिएका बस, माइक्रोबस र मिनीब’सलाई तत्कालै सम्बन्धित गन्त’व्यमा पठाउने काम भइरहेको उनले बताए । महान’गरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार मङ्गलबार मात्र झन्डै पाँच लाख जनाले उपत्यका छोडेको अ’नुमान गरिएको छ । महाशा’खा प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले सङ्ख्यामा उल्लेख गर्न नसके पनि नाकामा दशैँ–तिहा’रकै जस्तो भीड बढेको बताए ।
उपत्यका भित्रि’नेभन्दा बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या दोब्बर रहेको छ । नागढुङ्गा, भक्तपुरको जगाते, बल्खु–फर्पिङ, चन्द्रा’गिरि, ललितपुरको लेले, टोखा छहरे, मुड्खु, जरसिंहपौवा र रामकोटलगा’यतका नाकाबाट भित्रिनेभन्दा बाहिरिने सवारी साधनको सङ्ख्या दोब्बर पुगेको ट्राफिक प्रहरीले ज’नाएको छ ।
मङ्ग’लबार लामो दूरीका यात्रुको सङ्ख्या बढी देखिएको छ भने बुधबार छोटो दूरीका यात्रुको चाप बढ्ने अनुमान या’तायात व्यवसायीको छ । नागढुङ्गा नाका’बाट मात्र मङ्गलबार १५ हजार सार्वजनिक सवारी सा’धन बाहिरिएका छन् । इताजा खबरबाट
April 17, 2021 admin समाचार 1061
March 22, 2021 admin समाचार 1592
January 18, 2021 admin समाचार 1954
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (171381)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (164796)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (163832)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (161915)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (160377)